Ukuvikelwa kwedatha - Hands Off!
I-Paws Off - Stop Child Abuse yinhlangano efundisa futhi ivikele ekuhlukunyezweni ngokocansi kwezingane. Sithanda ukubika wonke amacala omphakathi owaziyo wokuhlukunyezwa kwezingane nokubulawa kwezingane kanye nomthengi wamavidiyo wokuhlukunyezwa kwezingane. Ngakho-ke sifuna amavolontiya avela emhlabeni wonke ukuletha wonke lawa macala ebalazweni.
Sicela ubhalise Kumacala Okuhambisa futhi usize ukukhombisa umhlaba ukuthi baningi kakhulu onyawana abagulayo kanye nezinhlangano ezihlukumeza izingane ngokocansi nokuthi kufanele sivimbele izingane zethu kuzo.